Maalinta: Meey 3, 2019
Saacadaha xiisaha leh ee Garoonka Trabzon
Agaasinka Gobolka ee Trabzon ee Kooxda Badbaadinta Caafimaadka Qaranka (UMKE) ee abaabulka 2018 sanadka "Shilka Badda" ee mowduuca "Martyr J.Asb. Kd. Bçvş. Ferhat GEDİK Trabzon Ka dib UMKE Jimicsi Gobol, sannadkan [More ...]
Diyaarinta Qorsheynta Dambiyada ee Garoonka
Si loo yareeyo waxyeelada shilalka diyaaradaha ee suurtagalka ah iyo in la tijaabiyo waxqabayada howlgalka ah, waxaa la fuliyay tabobarro bilaash ah oo la xiriira isuduwidda garoomada diyaaradaha. Marka la eego baaxadda Qorshaha Degdegga ah ee Elazığ, Trabzon iyo Balıkesir Koca Seyit Airport [More ...]
Tamgaci: Perst OMU waxay ku guulaysan doontaa hibo badan oo tareen leh
Xoghayaha Guud ee OMÜ Assoc. Dr. Menderes Kabadayı wuxuu booqday Maareeyaha Guud ee SAMULAŞ Enver Sedat Tamgacı, “OMÜ waxay ku heli doontaa sharaf intaas ka sii badan khadka cusub” Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Ondokuz Mayı (OMÜ) [More ...]
Howlaha dib-u-cusboonaysiinta waxaa sii wada qaybo kala duwan oo magaalada ah oo ay leedahay Dowladda Hoose ee Magaalada Sakarya. Hawlaha dib-u-cusboonaysiinta ee xirmooyinka hal-abuurka kiiloomitir ee '10 kilomitir' ee kala ah yoamyolu, Göktepe, Taşkısığı, Akarca iyo Küçük Söğütlü Neighborhoods oo ku yaal 'Adapazarı-Söğütlü' [More ...]
Tallaabada Wasaaradda Gaadiidka ay ku abuuri karto 'aagagga qiiqa yar ee taraafikada' ayaa farxad galiyay waaxda. Özet Wax lamid ah kuma noqon doonaan taraafikada taraafikada, iyagoo soo koobaya nidaamka, khubaradu waxay sharxiyeen xiisaha loo qabo dalabka. Awooda Tamarta ee Gaadiidka [More ...]
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, "Nidaamka e-commerce ee PTT si loo helo marin dhammaystiran oo ku saabsan Afrika iyo alaabada asal ahaan Afrika loo soo bandhigo adduunka iyadoo la tixraacayo doorka muhiimka ah ee aan u maleynayo." Ayuu yidhi. Gaadiidka iyo [More ...]
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) General Directorate, Bursa, Bilecik, Eskişehir iyo waddooyinka tareenka iyo saldhigyada gudahood xuduudaha degmada ee daroogada May 06 22 May 2019 in la sameeyo qayb ka mid ah dagaalka ka dhexeeya daaqa [More ...]
Engineers at KBU Mashruuca Qalinjabinta Maqalka
Jaamacadda Karabük Kuliyada injineerinka injineerinka, injineerinka gawaarida iyo waaxda injineeriyada tareenka ee ardayda ugu dambeysa ayaa la soo bandhigay. Kuliyadda Farsamada injineerinka ee Karab ink ee injineerinka injineernimada, injineernimada baabuurta iyo [More ...]
Qiimaha Tigidhada Dalxiiska Bariga Express ee cusub: Qiimaha tikidhada cusub ee Express Express waxaa lagu shaacin doonaa 29ka May. Sida uu sheegay Cahin Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
Rumi Tareen ayaa abuuray xusuusta ah ee Mevlana u imanaya Konya
Rumi Train, oo ay abuurtay Dawlada Hoose ee Konya ee xusuusta imaatinka Hazrat Mevlana iyo qoyskiisa Konya, ayaa ku adeegi doona khadka tareenka xawaaraha dheereeya ee u dhexeeya Konya iyo Istanbul inta lagu gudajiro maalinta 10. Hazrat Mevlana iyo qoyskiisa [More ...]
16 ee IU Faculty of Transport and Logistics. Shirarka Saadka ayaa la qabtay
16, oo ah halka tartan ee qaybta saadka loo maareeyo. Shirkii Saadka, waxaan ka wada hadalnay sida hal abuurka iyo codsiyada loo yaqaan 'blockchain codsiyada' ee go'aaminaya mustaqbalka logistikada ay saameyn ku yeelan doonto waaxda iyo faa'iidooyinka ay ka bixin doonto tartanka. Waxaa soo abaabulay Naadiga Saadka ee Jaamacadda Istanbul [More ...]
Dharka Bursa Bursaspor iyo calanka basasku waxay waydiisteen inay meesha ka saaraan wararka ayaa ka yimid sharraxaadda BURULAS'tan. Bayaanka uu sameeyay BURULAŞ: BUR In muddo ah ayaa laga helaa kanaalka warbaahinta bulshada, BURULAŞ wuxuu uga digay darawalada sababta oo ah xargaha Bursaspor iyo calamada. [More ...]
RayHaber 03.05.2019 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 03.05.2019 ee nidaamkayaga.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, oo lagu daabacay Rasmiga Rasmiga ah go’aanka Madaxweynaha ee la soo hordhigay 'degmooyinka waxaa lagu qaban doonaa dakhliga soo gala ee dhulka hoostiisa ee degmooyinka ayaa loo gudbin doonaa' sheegashooyinka aan ka turjumaynin runta. Qoraal qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda [More ...]